FPL Wk-4 ရမှတ် (@aggamun) — Steemit
FPL Wk-4 ရမှတ် (@aggamun)
aggamun (61) in esteem • 16 days ago (edited)
ဒါကတော့ FPL Wk.4 က ကျွန်တော် ရခဲ့တဲ့ အမှတ်နဲ့ လူ အခင်းအကျင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရမှတ် စုစုပေါင်း ၄၄ မှတ် ပဲ ရပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ ပုံပါ အတိုင်း ပါပဲ ဗျာ။ ခြေစွမ်း ပြမယ့် ကစား သမား ကို မရွေးချယ် မိတာ ပါ။ ဒီကြားထဲ မန်ယူက နိုင်သင့် တဲ့ ပွဲ မျိုးကိုလည်း သရေ သာ ကစားရင်း ပရိသတ် ရဲ့ မေတ္တာ ကို ခံယူ နေလေတော့ ကျွန်တော် က နှစ်ခါ ရှုံး ပါတယ်။ အားပေးတဲ့ အသင်းလည်း အမှတ် မရ ရွေးမိ တဲ့ ကစားသမား လည်း အမှတ် မရ တော့ပါဘူး။
နောက်တန်း ကစားသမား တွေ တစ်ယောက် တစ်မှတ် စီသာ ရပါတယ်။ ဒီအချက်က အမှတ် တိုးသင့် သလောက် မတိုးတာရဲ့ အဓိက အချက်ပါ။ အရင် တပတ် ကနဲ့ စာရင် တော့ ရမှတ် တက်လာပါတယ်။ သူတို့ ပေးထားတဲ့ အခွင့် အရေး အကုန်မသုံး သေးဘဲ ရမှတ် တက်လာတာက ကျေနပ် စရာပါပဲ။ ကစား ရတာလည်း နည်းနည်း သဘောပေါက် လာပြီမို့ ဒီ အချိန်က Wild card သုံးဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဒါကြောင့် နောက် လာမည့် Wk.5 အတွက် လူ အခင်းအကျင်း ကို Wild card သုံးပြီး ပြင်ဆင် မှာပါ။ ခု လက်ရှိ လူစာရင်း နဲ့ လုံးဝ မတူတော့ဘဲ ခင်းကျင်း သွားမှာပါ။ ဆိုတော့က ခုလာမယ့် ရက်သတ္တပတ် က ကျွန်တော်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု စစ်စစ် ကြီးနဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဝင် ရမှာ ဆိုတော့ ဘောလုံး စကားနဲ့ ပြောရရင် စိတ်လှုပ်ရှား ဖို့ ကောင်းနေုပြီပေါ့ ဗျာ။
ဒါကတော့ FPL Wk.4 က ကြှနျတျော ရခဲ့တဲ့ အမှတျနဲ့ လူ အခငျးအကငျြး ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရမှတျ စုစုပေါငျး ၄၄ မှတျ ပဲ ရပါတယျ။ အကွောငျး ကတော့ ပုံပါ အတိုငျး ပါပဲ ဗြာ။ ခွစှေမျး ပွမယျ့ ကစား သမား ကို မရှေးခယျြ မိတာ ပါ။ ဒီကွားထဲ မနျယူက နိုငျသငျ့ တဲ့ ပှဲ မြိုးကိုလညျး သရေ သာ ကစားရငျး ပရိသတျ ရဲ့ မတ်ေတာ ကို ခံယူ နလေတေော့ ကြှနျတျော က နှဈခါ ရှုံး ပါတယျ။ အားပေးတဲ့ အသငျးလညျး အမှတျ မရ ရှေးမိ တဲ့ ကစားသမား လညျး အမှတျ မရ တော့ပါဘူး။
နောကျတနျး ကစားသမား တှေ တဈယောကျ တဈမှတျ စီသာ ရပါတယျ။ ဒီအခကျြက အမှတျ တိုးသငျ့ သလောကျ မတိုးတာရဲ့ အဓိက အခကျြပါ။ အရငျ တပတျ ကနဲ့ စာရငျ တော့ ရမှတျ တကျလာပါတယျ။ သူတို့ ပေးထားတဲ့ အခှငျ့ အရေး အကုနျမသုံး သေးဘဲ ရမှတျ တကျလာတာက ကနြေပျ စရာပါပဲ။ ကစား ရတာလညျး နညျးနညျး သဘောပေါကျ လာပွီမို့ ဒီ အခြိနျက Wild card သုံးဖို့ အကောငျးဆုံး အခြိနျလို့ ယူဆမိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နောကျ လာမညျ့ Wk.5 အတှကျ လူ အခငျးအကငျြး ကို Wild card သုံးပွီး ပွငျဆငျ မှာပါ။ ခု လကျရှိ လူစာရငျး နဲ့ လုံးဝ မတူတော့ဘဲ ခငျးကငျြး သှားမှာပါ။ ဆိုတော့က ခုလာမယျ့ ရကျသတ်တပတျ က ကြှနျတျောရဲ့ ရှေးခယျြမှု စဈစဈ ကွီးနဲ့ ပွိုငျပှဲ ဝငျ ရမှာ ဆိုတော့ ဘောလုံး စကားနဲ့ ပွောရရငျ စိတျလှုပျရှား ဖို့ ကောငျးနေုပွီပေါ့ ဗြာ။
esteem esteem-myanmar neoxian battle steemace
16 days ago by aggamun (61)
kiddady (53) · 16 days ago
Good team @aggamun, but i think you need van djik in your team...yeah, and Aubameyang actually blends well in there.
aggamun (61) · 16 days ago
Thank you man. I want this player but I need more money. 😁😁 This is my old team. I have my new squad for this week. 😄😄